Free online ọrụ. Gbakọọ olu nke ọma, a cylindrical onu
Gbakọọ olu nke ọma
ịbịaru ọnụ ọgụgụ 1: 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6
Top dayameta D1
Bottom dayameta D2
Gbakọọ olu nke ọma ma ọ bụ olulu mmiri cylindrical udi
D1 - elu dayameta nke ọma
D2 - dayameta nke ala nke ọma
H - Omimi
Ọzọkwa, ị pụrụ ezipụta na-eri nke egwu ala a nke ọma na-eri nke mwepụ nke ala.
Ngụkọta oge nke olu
E nwere ihe atọ nhọrọ maka mmiri nke obibi. Ị nwere ike akuakuzinwo a onu onwe gị, ị nwere ike iku ọkachamara na-eme, ma i nwere ike igwu a ọma na saịtị. All ụzọ ha uru na ọghọm. Ọtụtụ ndị na-ahọrọ iji mee ndokwa maka gị na saịtị nke ọma, ebe ọ bụ na ọnụ ala, ị nwere ike iji ya maka ihe karịrị afọ 50 ma hichaa owuwu a nnọọ mfe karịa ọma. E wezụga egwu ala akọwa adịghị achọ a pụrụ iche ikike. Otú ọ dị, ka igwu a nke ọma na gị na saịtị, ị ga-akpa na-eme ụfọdụ mgbawa. Ebe ị ga-enyere anyị ngụkọta oge usoro. All mkpa ka ị na-eme bụ itinye na kwesịrị ekwesị ubi omimi nke ọma, ya n'elu na ala ala dayameta na-eri nke ogwugwu onu nọ n'ógbè gị, mgbe ahụ, usoro ihe omume ga gbakọọ olu nke ọma na-eme atụmatụ na-eri nke ya igwu ala.
Igwu Ala akọwa
Mbụ, na onwe onye na-egwu ala akọwa bụ oke nke ebe ya. Ọ dị mkpa na-emechi ya n'ime okirikiri nke 50 mita e nri storages na ndị ọzọ na-adịghị mma na ndị pụrụ imetụta mmiri mma. Ọ dịghị mkpa ka ndokwa a ọma nso karịa 5 mita n'ụlọ. Ma ọ bụghị ya, e nwere ihe ize ndụ nke na-emebi ntọala nke ụlọ ruru ka leaching ala.
Ọ dịkwa mkpa iji chọpụta omimi nke ọma. Nke a nwere ike ịmata ihe omimi nke yiri akụkụ na n'akụkụ ngalaba ma ọ bụ tupu gwutere mmanụ onu.
Biko mara na ị na-apụghị igwu a ọma n'oge ọ bụla n'afọ. Ọ kasị mma ruru eru maka oge a si June September. N'oge a, ndị aquifer bụ ala, nke pụtara na ị na-adịghị ga-eduhie mmiri si elu n'ígwé nke nwere ike ịnọgide na-mgbe mmiri idei mmiri.
Ihe ọzọ ihe ị kwesịrị ị na-enwe nchegbu banyere bụ otú ị ga-eme ka mgbidi nke ọma. Lee e nwere ọtụtụ nhọrọ. Nke a na-osisi etiti, monolithic ihe na brik. Onye ọ bụla n'ime ndị a ụzọ nwere uru ụfọdụ sikwuo ike. Ka ihe atụ, ndị dị ọnụ ala osisi eku. Ma n'ime otú ọ bụ na-adịghị ndụ. The ndụ nke ọ bụla karịrị afọ 15. Ke adianade do, ọ ga-kpochara kwa afọ site silt. Ọzọkwa n'oge igwu ala nke olulu mgbidi na-adịghị mesikwuru, na-eme ihe ize ndụ nke ida nke ụwa.
Monolithic ihe dị mma n'ihi na ọ na eliminates ingress nke elu mmiri n'ime ọma. Ma ndị dị otú ahụ a na-eme nke ọma ogologo oge, na ọ ga-eri ukwu ọzọ ọnụ. Lee i nwere abụọ nhọrọ. Ma ọ bụghị na-eme ka ihe iche Ntụle mgbidi onwe gị ma ọ bụ na-azụta ha. Tupu i kpebie otú n'ihu, biko mara na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke mesikwuru ihe mgbanaka ike karịa ndị na ị pụrụ ime ka onwe gị. Ma, n'ezie, ha ga-eri ihe.
Ọfọn ewu nke Adobe na-achọ pụrụ iche usọ na ogologo okwu ọzụzụ. Walls mkpa ka a mesikwuru, na n'okpuru brik wuo ntọala. Ma, dị ka ihe, Adobe adịghị ekwe ka penetration n'ime ọma nke elu mmiri.
Mgbe nke ọma dị njikere
Edi kûfre ụdị ngwaọrụ ị na-ahọrọ nke ọma, site n'oge ruo n'oge ọ chọrọ ka a disinfected. Nhicha kwesịrị mere dịkarịa ala ugboro abụọ n'afọ na ndị ọzọ na-ma ọ bụrụ na ọma ikike mba ọzọ ihe. N'ihi na nhicha nke ọma na enyemaka nke a mmiri mgbapụta pumped. Mgbe ahụ, na-aga ala, anyị na-emepụta ndị dị mkpa ọgwụgwọ usoro. Mgbe ndị mba ọzọ ihe, silt, ájá na unyi wepụrụ n'ala na mgbidi nke ọma, jiri ọgwụ gbuo nje. Iji mee nke a, mgbidi nke ọma iji aziza ma ọ bụ ahịhịa na ogologo ụra ịgba na ịcha ọcha.
Mgbe ọma jupụtara na mmiri ọzọ, ọ ga na-tinye ịcha ọcha na ego nke 150 mg kwa 1 liter mmiri. Mmiri weere na ọma kpuchie a mkpuchi, hapụrụ ruo awa abụọ. Mmiri a na-ahụ ọzọ e si n'ọdọ saa ọma na dị ọcha mmiri. Usoro a na-ugboro ugboro ruo mgbe chlorine ísì kpamkpam.